Home Wararka Xasan Sheekh oo Wasiirada & Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland la kulmay
Xasan Sheekh oo Wasiirada & Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland la kulmay
Madaxeynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kula kulmay golaha wasiirada maamulkaasi iyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka.
Kulanka oo ay qeyb ka yihiin xildhibaano ka tirsan Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda guud ee Siyaasadda Soomaaliya iyo horumarada uu gaaray maamulka Jubbaland.
Kulanka ayaa sidoo kale ah mid lagu soo dhaweynayo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo booqashadii ugu horeysay ku tegay Kismaayo tan iyo markii looga adkaaday doorashadii dalka ka dhacday 8 Bishii Febaraayo Sanadkii tegay ee 2019.
Wafdiga Xasan Sheikh Maxamuud waxaa shalay magaalada Kismaayo usoo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo masuuliyiin kale, waxaana la socday xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka.
Previous articleXildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka badbaaday Qarax Gaarigiisa loogu xiray
Next articleGuddiga Maaliyadda ee BF oo soo saaray warbixin ku saabsan Miisaaniyadda DF iyo dhaliilaheeda
Muqdisho Online - Xafiiska wararka ee Gobolka Banaadir. Waxaad nagala soo xiriir kartaa [email protected]om ama twitter @muqdisho_online
Puntland oo soo bandhigtay natiijada dad laga baaray cudurka CORONAVIRUS